ROAS भनेको के हो? | Martech Zone परिवर्णी शब्द
Martech Zone » परिवर्णी शब्द » आर बाट सुरु हुने परिवर्णी शब्द	» ROAS
ROAS को संक्षिप्त रूप हो विज्ञापन खर्चमा फर्कनुहोस्.
एक मार्केटिङ कुञ्जी कार्यसम्पादन सूचक जसले विज्ञापनमा खर्च गरेको प्रत्येक डलरको लागि कमाएको राजस्वको मात्रा मापन गर्दछ। लगानी फिर्ता (ROI) जस्तै, ROAS ले डिजिटल वा परम्परागत विज्ञापनमा लगानी गरिएको पैसाको ROI मापन गर्दछ। ROAS सम्पूर्ण मार्केटिङ बजेट, विज्ञापन नेटवर्क, विशिष्ट विज्ञापन, लक्ष्यीकरण, अभियान, रचनात्मक, र थप द्वारा मापन गर्न सकिन्छ।